The Four Brothers music, videos, stats, and photos | Last.fm
Led by singing drummer Marshall Munhumumwe, The Four Brothers came together in 1977 out of the ashes of the Great Sounds, and eventually became one of Zimbabwe's most popular musical acts. Munhumumwe, their chief composer as well as a drummer, began his career with The Great Sounds and Black Jack. He then joined Tineyi Chikupo's Mverechena Band, releasing one single in 1976. Soon after, Marshall left the band, bringing Alec Chipaika, Edward Zulu, and Never Mutare with him to form The Four Brothers. In fact, Marshall was Thomas Mapfumo's uncle - he credits Mapfumo for … read more
Led by singing drummer Marshall Munhumumwe, The Four Brothers came together in 1977 out of the ashes of the Great Sounds, and eventually became one of Zimbabwe's most popular musical acts. Munhumumwe, their chief composer as well as a drummer, began his career with The Great Sounds and B… read more
Led by singing drummer Marshall Munhumumwe, The Four Brothers came together in 1977 out of the ashes of the Great Sounds, and eventually became one of Zimbabwe's most popular musical acts. Munhumumwe, their chief composer as well as a drummer, began his career with The Great Sounds and Black Jack. He then joined Tineyi Chikupo's Mverechena Band, releasi… read more
The Pretty One - Remastered - 1995
1 Jan 1957 · 10 tracks